Posted on March 18, 2019 March 18, 2019 by J NP
काठमाडौं। अहिलेको धेरैको टाउको दुखाई बनेको छ, पुट्ट पेट । अर्थात भूँडी । स्वभाविक भन्दा ठूलो भुँडीले ज्यानलाई भद्दा देखाउँछ । भद्दा मात्र देखाउने होइन, रोगलाई समेत निम्त्याउँछ ।
त्यसैले अहिले भूँडी घटाउने कुरामा धेरैको चासो र चर्चा हुन्छ ।
भूँडी कसरी घटाउने त ? खाना नखाएर ? दौडिएर ? जिम गरेर ? औषधी खाएर ? शल्यक्रिय गरेर ?
प्रोटीनले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउँछ । प्रोटीनको सेवन गर्दा लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । प्रोटीनयुक्त खानेकुराहरु जस्तै चीज, मुङको दाल, पनीर, अन्डा र मिट नियमित सेवन गरौं ।
अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् कि हरियो सागपातमा क्यालोरी कम हुन्छ । कम क्यालोरीले गर्दा यसको सेवनले मोटोपना बढ्दैन । हरियो सागमा भुरपुर फाइबर हुन्छ जसले गर्दा पाचन राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि मुला, बन्दाकोभी आदि ।
तनावले हाम्रो शरीरमा धेरै प्रकारका समस्याहरु पैदा गर्छ । तनावका क्रममा निस्कने हार्मोन्सले शरीरको कर्टिसल लेभल बढाउँछ जसले गर्दा फ्याट जम्मा हुन्छ । कर्टिसल लेभल बढ्दा भोक पनि धेरै लाग्छ र पेटमा बोसो थुप्रिन्छ । त्यसैले हरेक दिन पर्याप्त निदाउनु र तनावमुक्त रहनु आवश्यक छ ।
प्रत्येक दिन १ स्याउ
स्याउ हाम्रो स्वास्थ्यका लागि एकदमै फाइदाजनक फल हो । प्रत्येक दिन एउटा स्याउको सेवन गर्दा डाक्टरबाट टाढा बस्न सकिन्छ । स्याउको बोक्रामा यूर्सोलिक एसिड पाइन्छ जसले पेटको बोसोलाई नियन्त्रण गर्छ ।
चिया जुनसुकै होस, यसले फ्याट कम गर्न मद्दत गर्छ । ग्रीन टी होस वा पिपरमिन्ट टी वा अनफर्मेन्टेड ह्वाइट टी, सबैले पेटको बोसो घटाउन सघाउँछन् ।
हरेक दिन बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउने गरौं । विहानै कागती पानी पिउनाले पेटको बासो कम हुन्छ । एक गिलास तातो पानीमा एउटा कागती निचोर्नुपर्छ र अलिकति नून मिलाएर पिउनुपर्छ । यसबाट चाडै मोटोपना घट्छ ।
बिहानै हल्का व्यायम गरौं । अथवा साइक्लीङ वा योगा गर्दा पनि हुन्छ । यसबाट सकारात्मक भाव आउनेछ र सकारात्मक सोच्ने क्षमता बढ्छ । बिहान नियमित व्यायाम गर्दा पेटको बोसो सजिलै नियन्त्रणमा आउँछ ।
कम फ्याट भएको खाना खाने र चिनीबाट टाढा बस्ने मानिसहरु अरुभन्दा बढि फिट हुन्छन् । एक चम्चा चिनीमा १६ क्यालोरी हुन्छ । यसले सजिलै मेटाबोलिज्मबाट शरीरले उर्जा प्राप्त गर्छ । त्यसैले चिनीको सन्तुलित प्रयोगले मोटोपना बढ्दैन । तर, चिनीबाट बनेका मिठाई, जस्तै जेरी, लड्डु, आदि अत्यधिक सेवनले मोटोपना बढाउँछ ।
पेटमा जम्मा भएको मासु फाइबरयुक्त खानाले कम गर्छ । फाइबरयुक्त खाना खानुभयो भने लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । यसले पेटको पाचन पनि ठिक राख्छ ।
ड्राइफ्रुट्सको मद्दतले २८ दिनभित्र आफ्नो वजन कम गर्न सकिन्छ । यसमा रहेको मोनोसस्यूट्रेटेड फ्याटबाट शरीरमा इन्सुलिनको स्तरमा सुधार हुन्छ र शरीरमा रहेको फ्याट बिस्तारै बिस्तारै कम हून्छ ।
प्राय मानिसहरु बिहान नुहाउन रुचाउँछन् । तर राति सुत्नुअघि नुहाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसो गरेमा मिठो निद्रा लाग्छ । मिठो निद्राले पनि वजन धेरै हदसम्म क मगर्न सकिन्छ । नुहाउँदा २७५ सम्म क्यालोरी बर्न हुन्छ ।
महिला होस् या पुरुष यी ४ काम गरेपछि नुहाउनै पर्छ